ကုမ္ပဏီတွေက ဘာကိုမူတည်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို ဘောနပ်စ်ဘယ်လိုပေးသလဲ ? - For her Myanmar
ကုမ္ပဏီတွေက ဘာကိုမူတည်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို ဘောနပ်စ်ဘယ်လိုပေးသလဲ ?
ကုမ္ပဏီက ဘောနပ်စ်ပေးတာကို မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကိုဖတ်ပါ
သင်္ကြန်နားနီးပြီဆိုတော့ ကုမ္ပဏီက ဘောနပ်စ်ပေးတာကို မျှော်နေတဲ့ ယောင်းတွေ ရှိလောက်မယ်ထင်တယ်။ ဘောနပ်စ်ပေးတာက ဟုတ်ပါပြီ။ ဘာကိုမူတည်ပြီး ဘောနပ်စ်ပေးတာလဲ ? ဘယ်လိုလူတွေ ဘောနပ်စ်ရတတ်လဲ ? ဘောနပ်စ်ကြောင့် ဘာအကျိုးအမြတ်တွေ ရှိနိုင်လဲ ? ဆိုတာတွေကော သိပြီးကြပြီလား ? အခု Stella ပြောပြပေးသွားမယ့် ဘောနပ်စ်အမျိုးအစားတွေကတော့ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်တဲ့ ဘောနပ်စ်တွေပါ။
အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်ရှည်တွေမှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဝန်ထမ်းတွေကို ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ Stella တို့ နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ သင်္ကြန်တို့၊ သီတင်းကျွတ်တို့၊ နယူးရီးယားတို့လို အချိန်တွေပေါ့။ ဒါက အလုပ်ရှင်အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ပျော်စေဖို့သက်သက် ပေးတာသာဖြစ်လို့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပါဘူး
ဒါကတော့ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဝန်ထမ်းတွေကို ပေးတဲ့ဘောနပ်စ်ပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏကို ကျော်လွန်ပြီးရောင်းရတဲ့အခါမှာ ရောင်းရငွေထဲက ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ဘောနပ်စ်ရပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ပိုရောင်းရလေ ဘောနပ်စ်ပိုရလေပေါ့။
ကုမ္ပဏီက ခိုင်းစေထားတဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်း ချောချောမွေ့မွေ့အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ဒီဘောနပ်စ်ရတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုဘောနပ်စ်မျိုးကတော့ ဝန်ထမ်းက ကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးအမြတ်ရရှိစေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ပေးတာပါ။ ဥပမာ ယောင်းရဲ့ ကြိုးစားမှုကြောင့် ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ခါတိုင်းထက် ပရောဂျက်ပိုဝင်လာတဲ့အခါမျိုးပေါ့။
Related article >>> လုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်မှုကို နှောင့်ယှက်နေတဲ့ အမှား(၇)ခု
ငွေကြေးပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ “employee of the month” စံပြဝန်ထမ်းဆုပေးတာမျိုးကိုတော့ Noncash Bonus လို့ ခေါ်တာပါ။ ဆုတံဆိပ်တို့ certificate တို့ တစ်ပတ်လောက် ခရီးစရိတ်ငြိမ်းထွက်ခွင့်ပေးတာတို့က noncash bonus ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
စိတ်ပညာအရ လူတွေရဲ့သဘောသဘာဝက ဘာဆုမှ မရဘဲ အလုပ်လုပ်နေရတာထက်စာရင် ဆုရမယ်ဟေ့ဆိုရင် အလုပ်ကြိုးစားချင်စိတ် ပိုဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့် အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဘောနပ်စ်ကို မက်လုံးပေးထားသင့်ပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရဆို ကုမ္ပဏီတွေမှာ ဘောနပ်စ်ကောင်းကောင်းပေးတာက ဝန်ထမ်းကောင်းတွေကို အလုပ်ခွင်မှာ ပျော်မွေ့အောင်ထိန်းထားနိုင်ပြီး ကုမ္ပဏီမှာ ရေရှည်ခံစေတဲ့အပြင် ကုမ္ပဏီအတွက်လည်း အမြတ်အစွန်းပိုရစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကုမ္ပဏီတွေဖက်ကလည်း ဝန်ထမ်းကောင်းတွေကို လက်မလွှတ်ချင်ရင် ဘောနပ်စ်ကောင်းကောင်းပေးဖို့လိုသလို ဝန်ထမ်းဖက်ကလည်း ဘောနပ်စ်လိုချင်ရင် အလုပ်ရှင်စိတ်ကျေနပ်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်နော် … ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ ပေါ့။
ယောင်းတို့ရော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘောနပ်စ်ရသင့်တဲ့လူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလို့ ထင်ရဲ့လား?
ကုမ်ပဏီက ဘောနပျဈပေးတာကို မြှျောလငျ့နတေယျဆိုရငျတော့ ဒါကိုဖတျပါ
သွင်ျကနျနားနီးပွီဆိုတော့ ကုမ်ပဏီက ဘောနပျဈပေးတာကို မြှျောနတေဲ့ ယောငျးတှေ ရှိလောကျမယျထငျတယျ။ ဘောနပျဈပေးတာက ဟုတျပါပွီ။ ဘာကိုမူတညျပွီး ဘောနပျဈပေးတာလဲ ? ဘယျလိုလူတှေ ဘောနပျဈရတတျလဲ ? ဘောနပျဈကွောငျ့ ဘာအကြိုးအမွတျတှေ ရှိနိုငျလဲ ? ဆိုတာတှကေော သိပွီးကွပွီလား ? အခု Stella ပွောပွပေးသှားမယျ့ ဘောနပျဈအမြိုးအစားတှကေတော့ လုပျငနျးခှငျတှမှော အမြားဆုံးတှရေ့တတျတဲ့ ဘောနပျဈတှပေါ။
အမြားပွညျသူ ရုံးပိတျရကျရှညျတှမှော လုပျငနျးရှငျတှကေ ဝနျထမျးတှကေို ပေးလရှေိ့ပါတယျ။ Stella တို့ နိုငျငံမှာဆိုရငျတော့ သွင်ျကနျတို့၊ သီတငျးကြှတျတို့၊ နယူးရီးယားတို့လို အခြိနျတှပေေါ့။ ဒါက အလုပျရှငျအနနေဲ့ ဝနျထမျးတှကေို ပြျောစဖေို့သကျသကျ ပေးတာသာဖွဈလို့ ထှထှေထေူးထူးပွောစရာမရှိပါဘူး
ဒါကတော့ အရောငျးမွှငျ့တငျရေးဝနျထမျးတှကေို ပေးတဲ့ဘောနပျဈပါ။ သတျမှတျထားတဲ့ပမာဏကို ကြျောလှနျပွီးရောငျးရတဲ့အခါမှာ ရောငျးရငှထေဲက ရာခိုငျနှုနျးအလိုကျ ဘောနပျဈရပါတယျ။ ပွောရရငျတော့ ပိုရောငျးရလေ ဘောနပျဈပိုရလပေေါ့။
ကုမ်ပဏီက ခိုငျးစထေားတဲ့ ပရောဂကျြတဈခုကို သတျမှတျထားတဲ့အခြိနျအတှငျး ခြောခြောမှမှေ့အေ့ောငျအောငျမွငျမွငျ ပွီးသှားတဲ့အခါမြိုးမှာ ဒီဘောနပျဈရတတျပါတယျ။
ဒီလိုဘောနပျဈမြိုးကတော့ ဝနျထမျးက ကုမ်ပဏီအတှကျ အကြိုးအမွတျရရှိစတေဲ့အခါမြိုးတှမှော ခြီးကြူးဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ ပေးတာပါ။ ဥပမာ ယောငျးရဲ့ ကွိုးစားမှုကွောငျ့ ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ ခါတိုငျးထကျ ပရောဂကျြပိုဝငျလာတဲ့အခါမြိုးပေါ့။
Related article >>> လုပျငနျးခှငျ တိုးတကျမှုကို နှောငျ့ယှကျနတေဲ့ အမှား(၇)ခု
ငှကွေေးပေးတာမြိုးမဟုတျဘဲ “employee of the month” စံပွဝနျထမျးဆုပေးတာမြိုးကိုတော့ Noncash Bonus လို့ ချေါတာပါ။ ဆုတံဆိပျတို့ certificate တို့ တဈပတျလောကျ ခရီးစရိတျငွိမျးထှကျခှငျ့ပေးတာတို့က noncash bonus ထဲမှာ ပါဝငျပါတယျ။
စိတျပညာအရ လူတှရေဲ့သဘောသဘာဝက ဘာဆုမှ မရဘဲ အလုပျလုပျနရေတာထကျစာရငျ ဆုရမယျဟဆေို့ရငျ အလုပျကွိုးစားခငျြစိတျ ပိုဖွဈပျေါလာတာကွောငျ့ အလုပျရှငျတှအေနနေဲ့ ဘောနပျဈကို မကျလုံးပေးထားသငျ့ပါတယျ။ လလေ့ာခကျြတှအေရဆို ကုမ်ပဏီတှမှော ဘောနပျဈကောငျးကောငျးပေးတာက ဝနျထမျးကောငျးတှကေို အလုပျခှငျမှာ ပြျောမှအေ့ောငျထိနျးထားနိုငျပွီး ကုမ်ပဏီမှာ ရရှေညျခံစတေဲ့အပွငျ ကုမ်ပဏီအတှကျလညျး အမွတျအစှနျးပိုရစပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကုမ်ပဏီတှဖေကျကလညျး ဝနျထမျးကောငျးတှကေို လကျမလှတျခငျြရငျ ဘောနပျဈကောငျးကောငျးပေးဖို့လိုသလို ဝနျထမျးဖကျကလညျး ဘောနပျဈလိုခငျြရငျ အလုပျရှငျစိတျကနြေပျအောငျ ကွိုးစားသငျ့ပါတယျနျော … ကိုငျးကြှနျးမှီ ကြှနျးကိုငျးမှီ ပေါ့။
ယောငျးတို့ရော ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဘောနပျဈရသငျ့တဲ့လူ တဈယောကျဖွဈပွီလို့ ထငျရဲ့လား?
Tags: bonus, Career, cash, Company, Employee, holiday, Job, Office, passion, salary, Workplace